Yechina beta vhezheni yeApple Q yakatoburitswa uye uku ndiko kuchinja kwayo | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi Iyo 4 beta vhezheni yeiyo ichave inotevera inotevera vhezheni yeApple yakaburitswa, vhezheni ine kodhi zita "Android Q" nayo zvimwe zvakagadziridzwa zvakawedzerwa kune ino nyowani system kuvaka uye haina kuwedzera mashandiro matsva saka iri iri vhezheni vhezheni.
Senguva dzose, kuongorora uku kwakanyanya kune vanogadzira, Iko Android Q ine yayo huru yekutarisa madingindira matatu: hunyanzvi, chengetedzo uye kuvanzika uye dijiti kugara zvakanaka.
1 Shanduko huru mu Android Q beta 4
1.1 Zvimiro zveAPIs nyowani
1.2 Yatove kushanda paFace ID yeApple
Shanduko huru mu Android Q beta 4
Nokuburitswa kweiyo Android beta 4 Q inotaridzika seyakavanzika nyowani kusvika kweAPIs matsva kwakagadzikana.
Saka nazvo vagadziri vanorayirwa kuyedza maapplication avo eApple Q kutora iyo SDK yeAPI 29.
Kuuya kwe Aya maAPI matsva anovhura mukana wekuti zvinoshandiswa paGoogle Play zvisvike paiyo nyowani yeApple.
Kune rimwe divi mu Android Q, zvinoratidzwa kuti vanogadzira vanogona kutora mukana wezvinhu zvitsva senge nyowani yekugovana menyu, rutsigiro rwuri nani rwekupeta nhare uye yepamutemo rima modhi.
"Nekupedziswa kwema API ekuvandudza uye kuburitswa kweshanduro inotevera yevanoda kukwikwidza, zvakakosha kuti vese vanogadzira Android vaedze mafomu avo azvino kuti aenderane neApple Q. Tinokurudzira kuti utange nekukurumidza sezvazvinogona," Google yakanyora.
Izvi zvisati zvaitika Google vanhu vanokurudzira kuvandudza chikuva kuAPI 29 uye kuti vanogadzira vanofungawo kuyedza nemhando dzakasiyana dzemvumo dzakadai sekuchengetedza, mvumo dzenzvimbo dzesani dzisina waya, uye mvumo yekuyedza kuzere kwescreen.
Ivo zvakare vanokurudzira kuyedza isiri-SDK inorambidzwa interface inoshandisa uye kutamira kune yeruzhinji SDKs kana NDK zvakaenzana panzvimbo.
Zvimiro zveAPIs nyowani
Nyowani APIs yeApple Q inopa mabasa matsva uye kugona yevashandisi nevagadziri, ndosaka vamwe vachisimbiswa mune ino nyowani beta.
Iyi ndiyo mamiriro ehukuru hwakadzama fomati kana uchishanda neAPI yekamera. Nayo zvinoreva, iwe unogona kushandisa AV1 yekushambadzira vhidhiyo uye HDR10 + yeiyo yepamusoro simba renji vhidhiyo. Zvekufambiswa kwemazwi uye mumhanzi, Opus encoding uye zvimwe zvinogona kushandiswa.
Imwe, semuenzaniso, inogona kupa ekupedzisira-kumagumo ekushandisa zviitiko nekugadzirisa zvinowira zvinhu uye tsigira chiratidzo chekufamba.
Unogona kudzidza zvakawanda nezve maAPIs matsva Mune inotevera chinongedzo.
Yatove kushanda paFace ID yeApple
Kunyangwe iyi yechina beta vhezheni isinga vape kuwanda kwemabasa evashandisi uye uko kunoshumwa kuvapo kwesarudzo yekusimbisa kumeso kunoratidzwa, iyo inoratidza kuti Google iri kushanda pachinhu chakafanana neFace ID pane Android.
Kufanana neApple tekinoroji, iwe unofanirwa kuvhura zvishandiso, kuratidza mapurogiramu, uye kubhadhara. Inoramba ichionekwa kana ichi chimiro chichava chakasimba seApple's Face ID uye kwete chete yakapusa 2D yekucherechedza mufananidzo system yakatorwa nekamberi-yakatarisana kamera.
Iyi yechina beta vhezheni inounzawo chinhu chitsva chinonzi "Screen Caution" kudzivirira kudzikamisa kupenya kwechiso kana mushandisi akatarisa pachiratidziri. Zvimwe zvinhu zvitsva zvinosanganisira shanduko diki kune iyo icon icon pane iyo mamiriro bar uye yekukiya skrini.
ari Vashandisi veGoogle Pixel zvishandiso zvino vanogona kuwana iyi nyowani beta vhezheni yeApple Q.
Panguva yeimwe yechitatu-bato michina ivo vanofanirwa kumirira mamwe mazuva mashoma kuti vagadziri vayedze uye vagadzirise iyi beta vhezheni.
Parizvino chete gumi nevaviri vanogadzira michina vakanyoreswa mune beta vhezheni yeApple Q gore rino. Parizvino, chete Yakakosha inodhinda Beta 12 pazuva rimwe chete seGoogle.
Nguva Iyo yekupedzisira vhezheni yeApple Q inotarisirwa kunge ichiwanikwa panopera gore rino, Google yakaburitsa yechina beta vhezheni yeinotevera huru vhezheni yeApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Yechina beta vhezheni yeApple Q yakatoburitswa uye uku ndiko kuchinja kwayo
Kwandiri shandisa Android 6, 7, 8, 9, ect. zvakafanana. Iko hakuna hukuru shanduko uye haina kunyanya kusviba neazvino vhezheni, uyezve chii, inononoka uye inononoka. Iwe unofanirwa kuve neakawanda processor uye RAM pane PC yeApple kuti ifambe mushe, izvo zvandinofunga zvinoshamisa.